Yusuf Garaad: Caliyaale iyo Naar Weyne - Taxanaha Maxaabbiistii 77 - Qaybta Afraad
Caliyaale iyo Naar Weyne - Taxanaha Maxaabbiistii 77 - Qaybta Afraad
Waxaan dhowr jeer tegey tuulada Caliyaale oo qiyaastii 15 u jirta Muqdisho. Waddada Balac ayay ku taallaa inta u dhexeysa Ceel Cirfiid iyo Garas Bintow. Waxaan raadinayay Cabdullaahi Bashiir oo wiilkiisu uu ka mid yahay maxaabbiis markaas ku jirtay xabsi Ethiopia in ka badan 10 sano, ehelkooduna uu u haysto in ay dagaalkii ku dhinteen.
Geed ayaan ag istaagnay markaasaan u billaabay sheeko kooban. Waan isu sheegay qofka aan ahay iyo hey'adda aan ka socdo. Waxaan u sheegay in aan maqlay in waiilkiisu uu ku geeriyooday dagaalkii 1977. Waxaan u raaciyay in ay jiraan dad loo haysto in ay dagaalka ku dhinteen, laakiin ka badbaaday oo Dowladda Ethiopia ay xabsi ku hayso. Ma maqashay ayaan iri warkaas.
Hase yeeshee dhacdooyin sannad ka dib aan arkay ayaa hadalkiisii iiga dhigay mid aan soo xusuusto, welibana xusuusteyda ka go'i waayay fahamka siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah ee aan kala kulmay ninkaas tuulo joogga ah.
Posted by Yusuf Garaad at 04:05:00
Moge 6 April 2019 at 14:41
Yusuf Garad Omar wax badan ayaan kaa bartay, maalinba maalinta ka danbayso waxaad soo qorto waa khibrah cusub oo aan ka faaidaysto